Man City Oo U Soo Baxday Wareega 16-ka Kooxood Ee UCL, Afar Xidig Oo Sky Blues Ah Oo Dhulka Soo Jiitay Napoli Iyo Sergio Aguero Oo Taariikh Cusub Abuuray. – WWW.Gool24.net
Man City Oo U Soo Baxday Wareega 16-ka Kooxood Ee UCL, Afar Xidig Oo Sky Blues Ah Oo Dhulka Soo Jiitay Napoli Iyo Sergio Aguero Oo Taariikh Cusub Abuuray.
Manchester City ayaa kulan cajiib ahaa oo dhex maray Napoli waxay soo awooday in ay guul soo laabasho ah ku gaadho 4-2 iyada oo Napoli markale muujisay sababta ay u tahay hogaamiyaasha horyaalka Talyaaniga, laakiin kooxda Guardiola ayay iskugu mid noqotay haddii goolal looga hor maro iyo haddii kaleba waxayna cashar lama ilaawaan ah u soo dhigtay Napoli oo mar u muuqatay in ay dhibaato wayn ku abuurayso Man City.
Manchester City ayaa guushan ku soo gaadhay goolal ka kala yimid Otamendi, Stones, Aguero iyo Sterling waxayna Manchester City u soo baxday wareega 16 ka kooxood ee Champions Leaque kadib markii ay sii wadatay guulihii boqolkiiba boqolka ahaa ee ay kaga soo jirtay Champoins Leaque.
Sergio Aguero oo gool ka dhaliyay kulankan ayaa noqtay xidigii abid goolasha ugu badan ka soo dhaliyay taariikhda Manchester City. Xidiga ree Agentina ayaa magiciisa si buuxda ugu qoray taariikhda Sky Blues isaga oo hadda laga bilaabo halyay ugu diwaan gashanaan doona.
DAQIIQADII 21 AAD kooxda martida loo ahaa ee Napoli ayaa la timid goolkeeda furitaanka iyada oo sidii laga filayay inka hogaamiyaasha Premier leaque iyo Serie A Manchester City iyo Napoli uu markale noqday kulan xiiso badan waxaana goolka furitaanka Napoli u saxiixay Insigne kadib markii uu caawin ka helay Mertens, waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Napoli kaga naxsaday kooxda Guardiola ee City.
DAQIIQADII 34 AAD Manchester City ayaa la timid goolkeeda barbaraha waxaana goolkiisii abid ugu horeeyay ee Champions Leaque kulankan ka dhalyay Nicolas Otamendi kaas oo kooxdiisa uga faa’iideeyay kubbad caawin uu ka helay Ilkay Gundogan waxayna ciyaartu noqotay barbaro 1-1 ah.
Kooxaha Manchester City iyo Napoli ayaa muujiyay qaab ciyaareedka fiican ee ay xili ciyaareedkan ku jiraan waxayna abuurayeen fursado aad u tiro badan laakiin qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro 1-1 ah.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta waxaa markiiba halkii ka sii socday dardartii waalida ahayd ee ay labada kooxood guusha ku raadinayeen iyada oo koox kastaaba doonaysay in ay la timaado goolal kale si ay saddexda dhibcood u xaqiijisan karto.
DAQIIQADII 48 AAD John Stones ayaa markii ugu horaysay Manchester City hogaanka ciyaarta u dhiibay kadib markii uu goolka labaad ee kooxdiisa uu ku dhaliyay kubbad caawin uu ka helay Leroy Sane waxayna ciyaartu noqotay 2-1 ay City natiijada ciyaarta ee goolka looga hormaray ay dhinaca kale ugu dhigtay.
DAQIIQADII 62 AAD Napoli ayaa markeeda ciyaarta ku soo laabtay kadib markii uu Jorginho dhaliyay gool rekoodhe ah si uu ciyaarta markale uga dhigo barbaro 2-2 ah waxayna ciyaartu noqotay mid xiiso badan isla markaana aan la saadaalin karin.
DAQIIQADII 69 aad Sergio Aguero ayaa markii labaad kooxdiisa hogaanka u dhiibay kadib markii uu gool caawin kale ka helay da’yarka Leron Sane kaas oo gool caawintii labaad ee kulankan sameeyay wuxuuna Aguero goolkan ku noqday xidiga taariikhda Manchester City ugu goolasha badan wuxuuna ciyaarta ka dhigay 3-2 ay Sky Blues hogaanka ciyaarta kula soo laabtay.
DAQIIQADII 90+2 AAD Machester City ayaa la timid goolka ay ugu sii quus goysay Napoli waxaana gool dhalintiisa cajiibka ah ee xili ciyaareedkan sii watay Raheem Sterling oo goolkan uga faa’iidaystay kubbad caawin uu ka helay De Bruyne waxayna ciyaartu noqotay 4-2 ay City ugu danbayn dhulka ugu tuurtay iska caabintii Napoli.
Manchester City ayaa guul ku soo gaadhay 4-2 si ay ugu soo baxdo wareega 16 ka kooxood ee Champions Leaque waxayna noqotay kooxdii labaad ee Premier leaque ka ciyaarta ee wareegay u soo gudubtay iyada oo la mid noqotay Tottenham oo Real Madrid guul wayn ka gaadhay si ay ugu soo baxdo wareega 16 ka kooxood ee UCL.